ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကြီးထွားလာပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာကို ဦး ဆောင်နေပါသည်။ | Martech Zone
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါနှင့်အတူသုံးစွဲသောပြီးခဲ့သည့်နှစ်က နာယက မယုံနိုင်လောက်အောင် roller Coaster စီးနင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှု spurt ၌ရှိ၏နှင့်အလွန်အောင်မြင်သော!
ငါတို့နိုင်ခဲ့တယ် Techpoint Mira ဆု.
ကျနော်တို့4၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပြီးစီးခဲ့သည် POS ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှု - Micros, POSitouch, Comtrex နှင့် Aloha
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာသို့ redundancy နှင့် security features များကိုထည့်ပြီးပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Multi- ယူနစ်ချည်နှောင်ဘို့စားသောက်ဆိုင်တည်နေရာ site ကိုပင်ပစ်ချ၏။
သောကြာနေ့ကကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲ နာယက။ ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသွန်းလောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစွန့်ခွာရန်ခက်ခဲသည် အောင်မြင်သော အင်တာနက်ကို ကုမ္ပဏီတွေက in အင်ဒီယာနာပိုလစ်။
ငါကုမ္ပဏီကိုကြီးမားတဲ့ပုံစံနဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာသံသယမရှိပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အပြောင်းအလဲနှင့်အဆင်ပြေမပြသည်မှာဖြစ်သည်။ ငါ Patronpath ကိုသွားရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာသူတို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအဖွဲ့ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းရှိအကောင်းဆုံးအင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကတော့အောင်မြင်မှုအများကြီးရပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုထားခဲ့တာပါပဲ။ ငါလိုအပ်တာတိုင်း Patronpath ကိုဆက်ပြီးအကြံဥာဏ်ပေးပြီးကူညီမယ်၊
ကြီးထွားမှုနှင့်ရလဒ်များသည် Patronpath ရှိအဓိကကျသည်။ ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်လူအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်
လွန်ခဲ့သော ၆ လခန့်ကကျွန်ုပ်သည်အစောပိုင်းကာလများကကျွန်ုပ်သိခဲ့သော Marty Bird နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ အတိအကျ ဒါပေမယ့်တိုက်ရိုက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့ဘူး။ Marty သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုအစကနေစတင်ဆောက်လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည့်မယုံနိုင်လောက်သောစျေးကွက်သမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာထည့်ဝင်သောကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးသောတိုးတက်လာသောအမျိုးသားအီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုလက်ခံရန်မာတီသည် Patronpath သို့သွားခဲ့သည်။ ၂ ရက်အတွင်းသူသည်စီမံကိန်းကိုယူခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အကြာတွင်သူသည်စီမံကိန်းပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယခုသူ၏အစီအစဉ်သည် ဆက်လက်၍ သူ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ပွင့်လန်းလာသည်။ တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်ပဲ! အနည်းငယ်သာသိရှိရသည့်အချက်မှာ Marty သည်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည် Audi TT အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှု.
အဖွဲ့၏ကျန်အဖြစ်ကောင်းစွာကြီးမြတ်ကြ၏။ Mark Gallo နှင့် Chad Hankinson တို့သည်ပညာရှင်ပီသစွာရော၊ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာကျွန်တော့်ကိုစိန်ခေါ်ချက်အချို့ကနေတစ်ဆင့်သွန်သင်ပေးဖို့ကူညီပေးတဲ့ခရစ်ယာန်ကြီးတွေပါ ငါနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကြွေးတင်နေသည် သူတို့ဖောက်သည်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်စိတ်အားထက်သန်သောတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်သော Account Management အဖွဲ့ရှိသည်။ ငါ Tammy Heath နဲ့တစ်နှစ်တာလုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူမဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်၊ နာရီများစွာမှာနာရီများစွာကိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်းထုတ်လုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ခက်ခဲသောအခြေအနေတွင်အလုပ်၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုအပြည့်အ ၀ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဘလော့ဂ်ကကျွန်မခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်မိသလိုခံစားခဲ့ရတယ် ပေ စီမံကိန်းများ။ ငါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ခြင်းလည်းဒေသဆိုင်ရာ networking ဖြစ်ရပ်များမှငါ့ကိုဆွဲထုတ်။ ငါပေါ်လာတဲ့ရှားပါးတဲ့အချိန်တွေ၊
Indy ၏မြောက်ဘက်ခြမ်းသို့ကားမောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးတန်ဖိုးထားခဲ့သောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်၏သမီးသည်ကျွန်ုပ်အားအိမ်ပြန်ရန်လိုအပ်လာသည်နှင့်တစ်နာရီလမ်းပေါ်တွင်တစ်နာရီကြာစိတ်နာကျင်မှုစတင်ဖြစ်လာသည်။ ငါအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့သား - မှာအပြည့်အဝဝန်ရုန်းကန်နေစဉ် IUPUI သူသည်ပုဂ္ဂလိကကျူရှင်နှင့်သင်္ချာအကူအညီပေးရေးစင်တာတွင်ကျူတာအပြင်အဖြစ်အပျက်များမှပြန်လာကာသူမစားရန်အချိန်ရှာခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့မယုံနိုင်လောက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Compendium Blogware သို့ ဦး တည်သည်
ဒီတော့ ... ခရစ် Baggott ကနေခေါ်တော်မူသောအခါ Compendium Blogware သူတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိကောင်းရှိမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ Compendium စတင်ခဲ့သည် Chris နဲ့ငါ (၂၀၀၆) တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်။
ငါ ExactTarget နှင့်အတူနေ၏နှင့်အလီအရောင်းဘုတ်အဖွဲ့လာကြ၏။ ခရစ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်အလီ၏ခေါင်းဆောင်မှုသည်ကုမ္ပဏီကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားစေခဲ့သည် Corporate Blogging ပလက်ဖောင်း။ ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်ကကုမ္ပဏီနှင့်နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးစင်မြင့်ကို ev ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Bose McKinney ကိုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးသူတို့ဟာ Search Engine ရဲ့ ဦး ဆောင်မှုကိုသတင်းပို့နေသည်ဟုပြောပြီးဖြစ်သည်။
တနင်္လာနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သည် Blogging angelဝံဂေလိ၏ဒုတိယသမ္မတ Compendium မှာ။ ငါ Ali အားသတင်းပို့မည်၊ ငါတို့အဖွဲ့များနှင့်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုပညာပေးခြင်း၊ angel ၀ ံဂေလိပြုခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပြုခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းစသည်တို့စသည်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်မှာဖောက်သည်များအလျင်အမြန်ထလာစေရန်နှင့်သူတို့၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး၏သက်ရောက်မှုများကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှု။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုအပြီးပယ်ချရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ငါသည်လည်း Indy ရှိစက်ဝိုင်းကိုထပ်မံအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ငါအလုပ်ဖော်ဟောင်းများစွာနှင့်တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်သေချာသည်!
အားလုံးစဉ်းစားရန် Pat Coyle နှင့်စတင်ခဲ့သည် စာဖတ်နေတယ် အဝတ်အချည်းစည်းစကားပြောဆိုမှုများ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတော်တော်လေးအံ့သြစရာပါပဲ။
ဒါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရောဘတ် Scoble နှင့် Israelသရေလအမျိုး၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်အားမှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကတွင်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေသောစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးခြင်းအတွက်! ငါနိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုများထဲမှတစ်ခုအတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရာထူးတစ်ခုယူထားသည်ဆိုသောအချက်ကဤအလတ်စား၏သြဇာကိုများစွာဖော်ပြသည်မဟုတ်ပေလော။
1,500 ပို့စ်များ! လူမှုမီဒီယာကြီးကြပ်မှုသို့!
4:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 10
ဂုဏ်ယူပါတယ် Doug! အလုပ်သစ်အကြောင်းအားလုံးကြားနာရန်မျှော်လင့်ပါ။
4:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 13
Mr. VP, ဆရာ၊ မင်းရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သတင်းပဲ။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက် Godspeed ။
4:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 31
4:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 33
ဂုဏ်ယူပါတယ် Doug ။ တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့သတင်း၊ မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 49
လူမှုမီဒီယာမှကြိုဆိုပါ၏ အချင်းလူငါအရမ်းချစ်တယ် !! ငါသည်ဤပစ္စည်းပစ္စယကိုစားရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော် !! မင်းအတွက်အကောင်းဆုံး
4:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 08
သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုများအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကို posted ထားပါ! ခင်ဗျားကိုဒီလိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဘာတွေယူဆောင်လာမလဲကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်
4:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 23
Doug - wow! ကြင်နာသောစကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်၏အရည်အချင်း၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတို့သည် Compendium တွင်ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည် - ဂုဏ်ပြုလွှာများ။ Patronpath ကိုမင်းရဲ့သိသာထင်ရှားသောထည့်ဝင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်သွားမယ့်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ မင်းရုံးခန်းထဲမှာရှိနေတာ၊ မင်းရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အပြုအမူ၊ တေးဂီတမှာအရူးအမူးအရသာ (နှင့်) ရွှင်လန်းစွာရယ်မောခြင်းကိုငါသတိရတယ်။ Twitter ပေါ်တွင်သင်နောက်လိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောနေ့လည်စာစားချိန်နာရီကိုအစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။ Doug ကိုဂရုစိုက်ပါ။
5:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 07
ဝိုး!! ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ် မင်းကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ မင်းရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုပါ။
5:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 26
Compendium နဲ့မင်းရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုမင်းကိုပြောပြခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒါကမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။
5:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 58
သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့မတူညီတဲ့အသံတစ်ခုပါ။ ငါသည်ဤဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်သင်၏အားလပ်ချိန်၌သင်ပြုသောအမှုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုအားလုံးရသောအခါမည်သို့သောအရာသည်ကြည့်ရသည်မှာပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်။
5:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 13
သငျသညျ Compendium မှာကြီးမြတ်ပြုသွားကြသည်!
6:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 28
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးဆန္ဒများ, Doug ။ အသစ်ဖျော်ဖြေပွဲအသစ်မှာမင်းကောင်းကောင်းလုပ်မယ်၊ (၎င်းသည်သင်ပြီးသားလုပ်ရပ်များကိုဖမ်းယူသည်။ )
6:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 5, 08
7:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 59
Conggats Doug, ဒီကနေ့ဒီသီချင်းကိုပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ သင်၏အခန်းကဏ္ new သစ်တွင်ကံကောင်းခြင်းကသင်နှင့် Compendium တို့ကဲ့သို့သောအသံများသည်ပြီးပြည့်စုံသောသင့်တော်မှုဖြစ်သည်။
မေလ 30, 2011 မှာ 8: 15 AM
ဝိုး!! Compendium မှာမင်းကောင်းကောင်းလုပ်မှာပါ။